इमर्जेन्सी कक्षमा एकपछि अर्को गर्दै ४० मिनेटमा ६ जनाको मृत्यु भएपछि... - Everest Dainik - News from Nepal
इमर्जेन्सी कक्षमा एकपछि अर्को गर्दै ४० मिनेटमा ६ जनाको मृत्यु भएपछि…
अस्पतालको इमर्जेन्सी कोठा । एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुन्छ । डाक्टरहरुले टाउको निहुराउँ छन् ।
लाश बाहिर लगिन्छ ।
तर, केही मिनेट बितेको हुँदैन, फेरी आपतकालिन घण्टी बज्छ । डाक्टरहरु दौडिन्छन् । तर त्यहाँ अर्को व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको हुन्छ ।
४० मिनेटको समय । लगातार ६ जनाको मृत्यु ।
डाक्टरहरुका लागि जीवनको सबैभन्दा ठूलो त्रासदीपूर्ण क्षण हाे । एकपछि अर्को लाश बाहिर जाँदै गरेको हेरेर उदास बन्नुबाहेक केही विकल्प नभएको अवस्था ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना महामारीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको परिणाम अहिले आम मानिसले भोग्नु परेको छ । चिकित्सकहरु हतास बनेका छन् ।
यो घटना न्यूयोर्कस्थित ब्रोकलिन अस्पतालको हो । सनी डाउनस्टेट हेल्थ साइन्स विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको यो अस्पतालमा अहिले सबै बिरामी कोरोनाबाट संक्रमित छन् । यो न्यूयोर्कमा रहेका तीनवटा अस्पतालमध्ये एउटा हो, जसमा कोरोनाबाट संक्रमित बिरामीको मात्रै उपचार गरिएको छ ।
सिएननमा प्रकाशित समाचार अनुसार, अस्पतालको इमर्जेन्सीमा महामारी भित्रिनु अघि खासै बिरामी आउँदैनथे । तर, अहिले सबै बिरामी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मात्रै आउने भएकाले निरन्तर मृत्यु देख्न चिकित्सकहरु बाध्य बनेका हुन । अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये २५ प्रतिशतको मृत्यु भइसकेको छ ।
आपतकालिन मेडिसिन चिकित्सक डा. लोरेन्जो प्यालाडिनो भन्छन्, “यो अस्पतालका कारण होइन, बरु रोगको प्रकृति नै यस्तो छ ।”
अहिले अस्पतालमा हाड भाँचिएका या पेट दुखेका बिरामी छैनन बरु त्यहाँ स्वास फेर्न संघर्ष गरिरहेका बिरामी छन् ।
त्यसैले चिकित्सकहरुसँग फुर्सदको समय नै छैन । अस्पतालमा कर्मचारीहरु यत्रतत्र दौडिरहेका छन् । बिरामी मर्छ, अस्पतालका कर्मचारी एक अर्काको मुहार हेर्छन् । लास बाहिर लगिन्छ । अनि त्यो स्थान निर्मलिकरण गरिन्छ ।
तर, यो अवस्था धेरै बेर रहन्न । केही समयमा नै फेरी उही नियती दोहोरिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस सनसिटी अपार्टमेन्टका २ कोरोना संक्रमित उपचारपछि घर फर्किए
अस्पतालमा रहेका ४ सय बढी कोरोना बिरामीमध्ये ९० प्रतिशत बिरामी ४५ वर्ष भन्दा बढी उमेरका छन् । ६० प्रतिशत बिरामी ६५ वर्ष माथिका छन् । तर अस्पतालमा ३ महिनाका शिशु समेत नभएका होइनन
हामी कहाँ २० को उमेरमा रहेका केही युवाहरु पनि छन् । उनीहरुले जीवनमा कहिल्यै यस्तो भोगेनन् । त्यसैले उनीहरुको पीडा झन बढी सुनिन्छ ।” डा. प्याल्याडिनो भन्छन् ।
अस्पतालमा तीन साता यता अहिलेसम्म ९४ जना कोरोनाका बिरामीको मृत्यु भइसकेको छ ।
ट्याग्स: इमर्जेन्सी कक्ष, काेराेना भाइरस